Buqqaatoota deebiisanii dhaabuuf waamichi taasifame - BBC News Afaan Oromoo
Buqqaatoota deebiisanii dhaabuuf waamichi taasifame
Paarlaamaan Itoophiaa har'a baname irratti haasaa baniinsaa kan taasisan pireezidaantiin biyyatti, baranas waadaalee hedduu uummata dhageesisaniiru.
Dursaanis namoota sababii walitti buu'iinsaatiin naannoolee Oromiyaa fi Somaaleetii buqqa'an deebiisanii dhaabuuf waamicha dhiyeessan.
Walgahiin waliinii mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii Itoophiyaa har'aas haasaa pireezidaantiin biyyattiin eegalamee xumurameera.
Dhimmisaanii eegamaa kan ture af-yaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Obbo Abbaaduulaa Gammadaa walgahicharratti argamanillee waa'ee iyyannoo itti gaafatamummaa af-yaa'ii gad-lakkisu isaanii hin kaane.
Yaa'ii manneen maree lamaaniif haasaa kan taasisan pirezidaantiin rippablika federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa Dr Mulaatu Tashooma kallattii hojii mootummaa biyyattii kan bara 2010 miseensoota manneen maree lamaaniif dhiyeesaniiru.
Waadaan jijjiirama fiduuf motummaan galame eessa gahee?
Haaluma kanaanis, sababii walitti bu'iinsi naannoolee Oromiyaa fi Somaalee gidduutti uumame lubbuu namootaa baduusaa kan himan preezidaantichi, mootummaan namoota yakka raawwatan gara seeraatti fiduuf hojjechaa jiras jedhaniiru.
Lammiilee sababiidhum a walitti bu'iinsa kanaatiin qabeenyaafi qe'eesaanii irraa buqqa'an kanneen deebbii'anii akka of danda'an gochuu irrattis hundumtu akka tumsu waamicha dhiyeesaniiru.
Fooyya'iinsi sirna filannoo biyyaa irratti adeemsifamuuf karoorfame filannoo bara 2012 A.L.I irrattii hojiirra akka oolu ni taasifamas jedhaniiru Dr. Mulaatuun.
"Rakkoolee gama damee bittaa, misoomaafi dhiyeessii lafa magaalaa, hojii farra kontiroobaandii fi tajaajilawwan manneen qopheessaa keessatti mul'atan dhabamsiisuuf hojiiwwan hojjetamanis iddoowwan baay'eetti harkiifataadha. Kanaafu, duulli fara malaamaltummaa eegalamees bara 2010 ttis cimee itti fufa," jedhaniiru.
Kana malees, waggoota sadan darbaniif dinagdee biyyattiitiif qormaata kan ture wal-gituu dhabuu fedhii fi dhiyeessiitii sharafa biyya alaa, dhimmoota bara 2010'tti xiyyeeffannoon itti kennamuun hojjataman keessaayi.
Guddina agarsiisuu dhabuu omishaalee gara biyya alaatti ergamanii kanaaf akka sababaatti kan himan pirezidaantichi, bara 2010 'tti omishaalee galii biyya alaa argamsiisan kan akka bunaa, saliixa, mi'eesituuwwaniifi omisha abaabootiif xiyyeeffannoon kennamee ni hojjetama jedhaniiru.
Bara 2009'ti dinagdeen biyyattii dhibbeentaa 10.9'n guddachuusaa kan himan pirezidaant Mulaatuun kunis biyyattii guddina dinagdeen si'ataarra jiraachuusaa agarsiisa jedhan.
Bara kanarraa eegaluun ijaarsaaa fi babalisuu yunivarsiittiiwwanii dhaabuun, barnoota teekniikaafi ogummaa aanaalee hund keessatti akka babal'atu fi manneen kitaabaa fi laaboraatoriiwwan ammoo dhaabbilee barnootaa ol'aanoo guutuu irratti xiyyeeffannoon ni kennama jedhaniiru.
Itti fayyadamni fandii dargaggootaa birriin biiliyoona 10 bara darbee ramadameef hojiin qophiisaa harkifataa kan ture yemmuu ta'u, dargaggoota miliyoona lamaaf carraan hojii uummamuusaa himaniiru.
Kana malees galii biyya keessaa guddisuuf kafaltiiwwan gibiraa sadarkaa ol'aanoo irratti xiyyeeffachuun ni hojjetama kan jedhan pirezidaantichi sirna taaksii biyyattii ammayyeesuunis hojiilee bara kanatti xiyyeeffannoon kennameef keessaayi jedhaniiru.